“Game of Thrones” (Lalaon’ny seza fiandrianana) sy ny Fiovàn’ny toetrandro: miomàna! tonga ny lohataona! · Global Voices teny Malagasy
Afaka hitarafana tsara ny zavatra hitranga ny "Game of Thrones"
Voadika ny 16 Avrily 2019 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Ελληνικά, Shqip, русский, українська, हिन्दी, ਪੰਜਾਬੀ, 日本語, English
Sary: sehatra ho an'ny daholobe tao amin'ny PXhere. https://pxhere.com/en/photo/780571
Avy amin'i Cassia Moraes
Alaivo sary ao an-tsaina ny tontolo iray misy ankolafy politika mitolona haka fahefana saingy tsy miraharaha ny loza iray mitatao tsy mbola hainy hatrizay hatrizay — nefa mety handringana ny fiarahamonin-dry zareo miaraka amin'ny tsy firaharahiana ny fetran-sisintany napetraky ny olombelona.
Io no mety azo amaritana ny andiany fahavalo sady farany amin'ny “Game of Thrones”, izay voalaza fa hivoaka amin'ny 14 Aprily, ka mandritra izany no hahitàna izay hiafaran'i Westeros, raha ny tafik'ireo lolovokatra kosa higorobaka amin'ny Rindrina. Afaka amaritana ny toedraharaha politika manerantany amin'izao fotoana izao ihany koa izy io, izay ahitàna ireo olona fantadaza toa an'i Donald Trump sy Jair Bolsonaro miady ny hahazo olona betsaka araka izay tratra hanaraka ny heviny, ao anatin'ny fotoana izay ilàntsika azy indrindra. Ireo hala hamohamo politika, toy ny rindrina fakàna vola lavitrisa sy ny fankalazana ireo fitondrana jadona taloha, no mameno ny fandaharampotoanan-dry zareo, raha ny loza tena mitatao marina sy tsy azo iverenana ateraky ny fiovaovàn'ny toedrandro kosa efa mitambesatra amintsika sahady. .
Ao anatin'ilay andian-tantara ” HBO “, tsy vitan'ireo Trano Goavana ny nanilika ireo loza ratsy indrindra tsy mbola natrehan'ny Tandrefana hatrizay, ary eo amin'ny fiainana tena izy, ny endri-dalao dia tsy hafa loatra amin'izany. Ireo izay, ara-tantara, tena mpisehatra tamin'ny fiovaovàn'ny toetrandro dia tsy niditra, na kely akory aza, tamin'ny resaka fanonerana, nefa ireo firenena vao mipongatra toa an'i Shina, izay tena mandefa entona miteraka fihafanàn'ny tany amin'izao fotoana izao kosa, mampiasa ny zara fa fihetsehan'ireo firenena mandroso mba ho fialantsiny hanamarinana ny tsy fihetsehany. Raha toa ka manamafy ny toeran'ireo firenena vao mipongatra ny fotokevitra hoe ‘andraikitra ifampizaràna saingy misy fahasamihafàny’, ho isan'ny ho voa mafy ihany koa ry zareo raha toa ny fiarahamonina iraisampîrenena tsy mahavita mamongotra ny fiovaovàn'ny toetrandro. Angamba ny sarinteny ataon'ireo fotsy mpivenjivenjy no manamora ny fahatakarana azy. Nofinofy ilay tetikady “zavamanahirana ny mpifonja”, amin'ny fampitomboana be ny tombony isambatan'olona . Raha resy an'ady ny Westeros manoloana ireo fotsy mpivenjivenjy, tsy hisy seza fiandrianana hipetrahan'i Cersei, na ny hafa koa.
Araka izany, nahoana no sarotra be ho an'ny ankamaroan'ireo Westerosiens ny miatrika ilay loza efa manambana avy any Avaratry ny Rindrina? Azo ambara ho sarotra ihany ny mahatakatra zavatra iray tsy mbola niainana hatrizay, ary mifanohitra amin'izay zavatra niainan'ireo razamben'ny tena. Izany angamba no antony nanaovan'i John Snow vy very ny ainy sy ny hoavin'i Westeros mba hahazoana “velona” ny fotsy iray mpivenjivenjy (raha misy ny zavatra toy izany). Amin'ny maha-Don Quichotte azy amin'ilay fandaharana, mino i Snow fa afaka mandresy ny tsy fihetsehana politika amin'ny fanipazana ara-bakiteny ny olana ho eny an-tavan'ireo mpanapaka hevitra. Na izany na tsy izany, iza no mety handà ny fisian'ny zavaboary iray raha efa mila hanaikitra ny tena?
Ny mahaliana tokony hojerena dia ny ho fomba fitondrantenan'ireo olona ireo raha tsy isalasalana intsony ny fisiana na tsy fisian'ny loza manambana aterak'ireo fotsy mpivenjivenjy. Valinteny fototra miisa telo no azo raisina, kanefa samy mitovitovy daholo amin'ny toetoetra ankehitriny misy ny olan'ny fiovaovàn'ny toetrandro.
1. Ny fizotry ny famahàna ny olana
Angamba tany aloha tany ianao tsy nino velively ny fisian'ireo fotsy mpivenjivenjy (na ny fiovaovàn'ny toetrandro), na nohamaivainao ny zavatra mety hitranga ho aterany. Nefa ny zavanisy tato ho ato dia nitondra anao hametraka fanontaniana indray momba ny fomba fijerinao hatrizay sy izay notombananao ho manandanja hatreto. Izany no nanjo an'i Daenerys Targaryen, izay niato kely tamin'ny fikatsahany fahefana mba hiatrehany olana iray maika kokoa sy tsy azo iverenana. Nafoin'i Jaime Lannister ihany koa ny fitokisana tsy azo nohozongozonina nananan'i Cersei anabaviny taminy, ka lasa izy nanjohy ilay fahavalon-dry zareo fahiny mba hiady ho an'ny fahaveloman'ny rehetra. Mbola nandeha lavidavitra kokoa aza i John Snow ka nampianatra ny fahavalony ny fomba famonoana ny fotsy mpivenjivenjy, namboraka tsiambaratelo miaramila noho ny tombontsoa iraisana. Eo amin'ny fiainana tena izy, misy hetsika toy ny namotsoran'i Elon Musk ireo brevets rehetra an'i Tesla mahatonga antsika ho very saina hoe ao anaty tontolo iray mikorontana ambony ambany dia tsy misy na iray aza tombontsoa mpifaninana mety ho tafavoaka velona.
2. Safidy ny hihemotra
Toy ny an'iretsy mpisehatra notanisaina etsy ambony iretsy, voakorontan'ny fifanenany taminà fotsy iray mpivejivenjy ny fomba fahitàny izao tontolo izao sy ireo laharam-pahamehan'i Euron Greyjoy. Na izany aza, nanapaka hevitra ny tsy hanjohy ny fiarahamientan'i Daenerys izy. Taorian'ny nanamarinan'i John Snow fa tsy mahay milomano ireo fotsy mpivenjivenjy, nanapaka hevitra i Euron fa handao an'i Cersei sy ireo hafa rehetra ary hiverina any amin'ny nosiny, toerana heveriny fa haha-tsara aro azy manoloana ny tafik'ireo lolovokatra. Nanoro hevitra an'i Daenerys mihitsy aza izy mba hanao toy izany koa, tamin'ny nilazàny fa azon'izy roa ireo atao ny hifehy izao tontolo izao rehefa mifarana io krizy io.
Fa hisy zavatra tavela hanjakàna ve anefa rehefa tonga izany?
Raha hiverenana ny fandalinana ny fiovaovàn'ny toetrandro sy ny fiarahamiasan'ny rehetra, angamba tsy dia ho voadona be loatra ireo firenena toa an'i Etazonia sy Brezila raha miohatra amin'i Tuvalu sy ireo nosy hafa ao Pasifika. Saingy nofinofy ihany ny hieritreretana hoe tsy ho azon-doza amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro ry zareo. Tsy misy na iray aza ho afa-bela.
3. Na izany na tsy izany dia tsy nanelingelina velively ny hatsiaka
Heverin'i Cersei fa azony tehirizina — na hamafisina mihitsy aza — ny fahefany, raha ny hafa rehetra eto ambonin'ny tany kosa ho fatin'ny hatsiaka. Tsy hoe fotsiny laviny ny hanatevina laharana ireo mpanohitra—fa heveriny aza ny hanafika mba hampitomboana ny tombontsoany ao anaty fotoana fohy. Mametraka sakana amin'ny fiarahamiasa iraisampirenena ireo firenena toa an'i Rosia sy Arabia Saodita mba hahazoan'ireo indostrian-dry zareo mpamokatra solika azo avy amin-javatra lò. Saingy raha mahavita mampitombo ao anatin'ny fotoana fohy ny PIB (harinkarena faobe) azony ireto farany, tsy handeha hiaro velively ny vahoakan'ny fireneny manoloana ny vokadratsy tena ratsy dia ratsy ateraky ny fiovaovàn'ny toetrandro ry zareo.
Toetra iray iraisan'ireo fotsy mpivenjivenjy sy ny fiovaovàn'ny toetrandro ny tsy fahafahana mamantatra mialoha ny famelezana hataon-dry zareo. Zava-baovao ho an'ny olombelona ireo famelezana roa ireo raha lazaina tsotsotra, ary tsy dia misy loatra fotoana ahafahana miomana hiatrehana azy. Tao anatin'ny 25 taona nifampiresahana momba izay tetikady horaisina nandritra ireo fihaonana isantaona fanaon'ny Firenena Mikambana (ny COP), ankehitriny ireo mpianatra dia manao tsindry amin'ireo mpitondra fanjakàna mba hanajanonan-dry zareo ireny ny resabe fa mba hanomboka hiasa. Brezila aza moa niala mihitsy tsy ho mpitarika ny fihaonana COP manaraka tokony hatao any aminy amin'ity taona ity, manidy araka izany ny varavaran'ny mety hisian'ny fampiasambola sy ny fiarahana miasa.
Sary afaka maneho tsara ny zavatra mety hitranga ny “Game of Thrones” raha toa ka tsy henointsika ny feon'ireo ankizy. Rehefa namoy ny iray tamin'ireo dragona teo am-pelatanany i Daenerys tao amin'ny Night King, avy hatrany dia niha-mafy ny fidonan'ny tafik'ireo lolovokatra. Io tranga tokana io dia nanova ny endri-daklao rehetra tao anatin'ny indray mipi-maso, niaraka tamin'ny fahafahana manameloka ny olona rehetra ho faty.
Torak'izay koa, ny fiantraikan'ny fiovaovàn'ny toetrandro dia mety hihamafy amin'ny fomba mahery setra: haavo iray atsy ho atsy amin'ny fihafanàn'ny tany mety hahatonga ny toetrandro erantany ho aminà teboka iray hitsimbadihan'ny zavatra rehetra, hiteraka fiovàna tsy nampoizina ary tsy ahitam-panàfana. Tsy hay izay tena endrik'io haavo io ho an'ireo dinga isankarazany, saingy hita mibaribary ny fiakaran'ny maripàna ambonin'ny 1-3°C. Ireny dingana ireny dia mety koa hihamafy araka ny faharetany. Indrindra fa hitoetra mandritra ny taonjato maro ireo tena mpisehatra amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro, ary ireo fiakarana tsy mitsahatry ny maripàna dia mety hiteraka antony iray hanosika bebe kokoa ny fihafanàn'ny tany, tokony hampihatra ny ftokevitra fisorohana ireo politikan'ny fampihenana am-pahamalinana, mba hisorohaa ny loza mahatsiravina sy tsy ahitam-panafany ateraky ny fiovaovàn'ny toetrandro amin'ny firafitry ny toetrandro eto an-Tany.
Mpanorina no sady Tale Jeneralin'ny “Youth Climate Leaders (YCL)” i Cassia Moraes. Ananany ny diplaoma MPA amin'ny Fomba fanao fampiharana ny fampandrosoana, nomen'ny Oniveristen'i Kôlômbià, ary mpikambana koa izy ao anatin'ny filankevitry ny “Lemann Fellows board of the Columbia Global Center Rio de Janeiro”. Raha mila fanampim-panazavana misimisy kokoa momba ny fandaharanasa Youth Climate Leaders 2019 Immersion, potsiro eto.